दीपक बज्राचार्यको निर्देशनमा पहिलो म्युजिक भिडियो – Nepali news portal
दीपक बज्राचार्यको निर्देशनमा पहिलो म्युजिक भिडियो
पश्चिमा शैलीमा झुकाव रहेका बज्राचार्य लोकशैली प्रेमी बन्दै, यस्तो छ रहस्य
१३ फाल्गुन २०७६, मंगलवार १५:१४ February 25, 2020 काठमाडौं डेष्क
दीपक बज्राचार्यले “राती राती अप्ठ्यारो छ दिनमै भेट्नु” बोलको नयाँ गीत बजारमा ल्याएका छन् । उनकै संगितमा रिक्की शाक्यको शब्द रहेको गीतको भिडियो पनि निर्माण भएको छ । ठमेलमा रहेको चर्चित क्लब एलओडीमा भिडियो छायाँकन गरिएको छ । यस भिडियोको निर्देशन भने दीपक आफैँले गरेका छन् । उनको निर्देशन रहेको यो डेब्यु भिडियो हो । यस भिडियोमा अभिनय रहेको छ फ्रान्सेली मोडल मार्गट अरनाउडको ।
सांगितिक यात्रामा २०४६-०४७ सालदेखी आबद्ध रहेका बज्राचार्यलाई “मनमगन” गीतले अहिलेको पुस्तामा राम्ररी चिनाएको छ । “ओ अमिरा” गीतमार्फत् उनले गायकको छवि बनाएका हुन् । उनको “मायाको डोरीले”, “कालीकाली” लगायतका गीतहरु चर्चित छन् । दीपक बताउँछन् “राती राती अप्ठ्यारो छ” पनि मनमगनकै सिक्वेलमा भिडियो बनेको छ । सन् २००९ मा अमेरिकाको लुजियानामा कन्सर्ट गर्दा बज्राचार्यलाई त्यहीको एक नागरिकले सोधे—गीतमा प्रयोग भएको भाषा बाहेक गीतार, ड्रमसेट र शैली सबै हाम्रै होइन र ? तिमीहरुको आफ्नोपन अनि आफ्नो बाजा छैन ? लोकशैलीभन्दा पनि पश्चिमा शैलीमा मोह रहेका बज्राचार्यले गीतार र ड्रमसेट बजाएर माहोल तताइरहेका थिए र पनि उनलाइ यो प्रश्नले मन चिस्याइरहेको थियो ।
बाजागाजा, धर्म परम्परा, नाचगान र साँस्कृतिक सम्पदाको हिसाबले विश्वमा धनि मानिने नेवार समुुदायमा जन्मे हुुर्केका दीपकलाई साँगितिक यात्रामा लागेको १५ बर्षपछि त्यस्तो प्रश्न सुन्दा रन्थनिए । त्यसताका ती विदशीलाई जवाफ दिन नपाएका दीपकले त्यसपछिका हरेक गीतमा भने मौलिकता झल्काउने नेवाः बाजा र सँस्कृति समावेश गर्न थालेका छन् । २०७५ सालमा सार्वजनिक भएको मनमगनमा उनले नेवारी धिमे बाजा, धिमे बोल, जात्रा, कुमारी बोल, लाखे नाचका साथै अन्य परम्परागत संस्कृति झल्किने छलिया नाच, झाक्री नाच पनि समावेश गरेका छन् । उनको “मनमगन” नेपाली भाषा बाहेक हिन्दी र नेवारी भाषामा पनि रेकर्ड भइसकेको छ । “मनमगन” गीतले नेपाली मौलिकतालाई विश्वसामु चिनाएपछि बज्राचार्य प्रफुल्ल छन् ।
“राती राती अप्ठ्यारो छ” मनमगनकै सिक्वेलमा बनेको छ, जसबारे दीपक आफ्नो फेसबुक पेजमा लेख्छन् “आजकल पार्टी जाँदा पहिला जस्तो मजा लाग्दैन। सहकर्मीहरु त्यति भेट हुँदैनन्। चाडपर्व पनि अलि शुन्य शुन्य लाग्छ। मलाई मात्रै होइन, वरीपरि हेर्छु, उस्तै देख्छु। फेसबुक तिर फोटो देख्छु, कहिले विदेशमा सम्पूर्ण ट्रेनका डब्बामा नेपाली भरिएको देख्छु। विदेश तिर आयोजना हुने आफ्नै कार्यक्रमहरुमा उपस्थित हुने हजारौ दर्शकहरु देखेर अचम्मित हुन्छु। आजकल मेरा आफ्नै साथी भाईहरुसंग नेपाल भित्र भन्दा बाहिर धेरै भेट हुने गर्छ। यस्तै कुराले सोच्न बाध्य हुन्छु, यो कस्तो मोह विदेशको, यो कस्तो आकर्षण प्रवासको, मलाई राम्रो सँग थाहा छ, बाध्यता सबैको छ। बुझेको छु रहर होइन कर होला तर पनि लाग्छ सबैलाई विदेशले मोहनी लगाएकै हो। विदेशका चिल्ला सडकहरु, अग्ला अग्ला घरहरु, फराकिला बाटो घाटो, अनि फेसबुकमा छ्यताछुल्ल पोखिने चिल्ला गाडीहरु, सफा पोशाकमा सजिएका बनावटी मुस्कानहरु, यस्तै यस्तै त हो मोहनी लाउने।
आफन्त सँग छुटाउने, चाडपर्वमा एक्लो बनाउने, मायालुको सम्झनामा छट्पटिनु पर्ने, अनि धेरैलाई काठको बाकसमा फर्कन बाध्य बनाउने, यो सबै पछाडी एउटै शक्ति छ। बाहिरी सुन्दरता र भौतिक सम्पन्नता एउटा कालो शक्तिको नमुना मात्र हो, जो सँग हामीलाई लड्नु छ । यस भिडीयोमा एक सुन्दरी यूवति त्यही भ्रम र कालो शक्तिको रुपमा देखाउने कोशिस गरेकोे छु। हरेक चम्किलो चिज हिरा नहुने र आकर्षित हुन नपर्ने भाब पनि झल्काइएको छु। मेरो मनमा चलेको यहि आँधिबेरीको कथा हो ‘राति’ । कालो शक्ति अर्थात् नेगेटिभ इनर्जीसँग पोजेटिभ इनर्जी बिजयको संकेत हो “राति”। सुन्दर र लोभलालचको सैतानलाई हाम्रो आफ्नो कला संस्कृतिको लाखे तथा झाँक्रीरुपी सकारात्मक सोचले पराजित गरेको कथा हो ‘राति’ ।”
दीपकले सन् १०१३ देखि “लेट्स द वल्ड्र डान्स इन नेपाली म्युजिक” अभियान चलाई गीत गाउन थालेका छन् । यो भिडियो परिकल्पना उनकै छोरी चेरिसा बज्राचार्यले गरेकी हुन् र “मनमगन” को परिकल्पनाकार पनि चेरिसा नै हुन् । जंगलबीच बाथटपमा सुन्दर युवती नुहाइरहेकी हुन्छिन् । रातको बाह्र बजे ह…र…र….. ध्वनिसहित भिडियो सुरु हुन्छ । कालो पहिरनमा उनी “एलओडी” क्लवमा पुग्छिन्, जहाँ गितार बजाएर दीपक गुनगुनाइ रहेका हुन्छन्— राती राती अप्ठ्यारो छ दिनमै भेट्नु सारै गाह्रो लाग्दो रैछ मनलाई छेक्नु।……….
मानवअधिकारकर्मी पहाडीसहित २६ जना पक्राउ
नेकपाको दुबै पक्षलाई निर्वाचन आयोगले आधिकारीकता दिएन
आज मिति २०७७, माघ १२ गते सोमबार दिन ग्रहदशा अनुसार तपाईंको राशीफल हेर्नुहोस्।(भिडियो सहित)
कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या दुई हजार नाघ्यो
आज मिति २०७६, फाल्गुन ११ गते आइतबार को दिन ग्रहदशा अनुसार तपाईंको राशीफल हेर्नुहोस्। (भिडियो सहित)
विरोधी निउँमात्रै खोज्दैछन्, कहिलेदेखि कोट मिलेन, टोपी मिलेन भन्ने हुन् – प्रधानमन्त्री ओली